Iyo Inoshamisa Yekutengesa Mukana Kuuya neIOT | Martech Zone
Vhiki kana kupfuura yapfuura ndakakumbirwa kuti nditaure pachiitiko chedunhu pane Internet Zvinhu. Semubati-wemo weiyo Dell Mwenje podcast, Ndanga ndiine toni yekuratidzwa kuEdge komputa uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu hwatove kutora chimiro. Nekudaro, kana iwe ukatsvaga mikana yekushambadzira zvinekuremekedza IoT, pane chokwadi hapana hurukuro yakawanda online. Muchokwadi, ndakasuwa nekuti IoT inoshandura hukama pakati pemutengi nebhizinesi.
Nei IoT Inoshanduka?
Kune hutsva hwakawanda huri kuuya kuchokwadi hunozoshandura IoT:
5G Wireless ichagonesa bandwidth kumhanya kuchada kubvisa wired kubatana mukati meimba uye bhizinesi. Miedzo yakapedza kumhanya pamusoro pe1Gbit / s chinhambwe chinosvika kumakiromita maviri.
Miniaturization Zvemakomputa zvinhu zvine yakawedzera komputa simba zvichaita IoT zvishandiso zvine hungwaru pasina kudiwa kwekuwandisa kwemagetsi emagetsi. Makomputa madiki pane peni anogona kumhanya nekusingaperi nesimba rezuva uye / kana waya isina waya.
chibatiso kufambira mberi kuri kuiswa mukati memidziyo pane kusiiwa kune vatengi nemabhizinesi kuti vazvizive.
The mutengo weIoT zvishandiso zviri kuzviita zvisingadhuri. Uye kufambira mberi mumaseketi akadhindwa kunozoita kuti makambani agadzire uye agadzire avo eIoT zvinhu - zvichigonesa kushandisa kwavo kwese kwese. Kunyangwe yakadhindwa OLED inoratidzira ekuratidzira ari padhuze nekona - ichipa nzira dzekutaridza mameseji chero kupi.
Saka Izvi Zvichakanganisa Sei Kushambadzira?
Funga nezvekuti vatengi vakawana nekutsvagisa sei zvigadzirwa nemasevhisi anopihwa nemabhizinesi mumakore zana apfuura.
Musika - Makore zana apfuura, mutengi aingodzidza nezvechigadzirwa kana sevhisi yakananga kubva kumunhu kana bhizinesi kuitengesa. Kushambadzira (saka kunzi zita) ndiko kugona kwavo kutengesa mu musika.
Yakaparadzirwa Midhiya - Sezvo vezvenhau pavakazowanikwa, semuchina wekudhinda, mabhizinesi izvozvi aive nemukana wekushambadzira kupfuura izwi ravo - kunharaunda dzavo nekune dzimwe nzvimbo.
Mass Media - Mass media yakamuka, ikozvino ichipa mabhizinesi nekwanisi yekusvitsa zviuru kana kunyange mamirioni avanhu. Direct mail, terevhizheni, redhiyo… chero ani zvake aive nevateereri aigona kuraira akakosha madhora kuti asvike kune vateereri. Yakanga iri yepamutemo, iyo yekushambadzira indasitiri yakakura ikave yakakura kwazvo nzvimbo uye purofiti. Kana mabhizinesi aishuvira kubudirira, vaifanirwa kushanda kuburikidza neinobhadharwa masuo evashambadzi.
Digital Media - Iyo Internet nevezvenhau vezvenhau zvakapa mukana mutsva uri kutemesa kure kune vakawanda midhiya Makambani ave kugona kushanda neshoko remuromo kushambadzira kuburikidza nekutsvaga uye magariro nzira kuvaka zivo uye kubatana nevataridzirwa vateereri. Ehezve, Google neFacebook vakatora iwo mukana wekuvaka inotevera nzira masuo pakati pebhizimusi nemutengi.
Nguva Itsva Yekutengesa: IoT
Iyo nyowani nguva yekushambadzira yave pedyo patiri izvo zvinonakidza kupfuura chero chinhu chatakaona kare. IoT ichapa mikana inoshamisa yatisati tamboona - mukana wemabhizinesi wekupfuura magedhi ese nekutaurirana, zvakare, zvakananga netarisiro nevatengi.
Mukati mezviratidziro, shamwari yakanaka uye Nyanzvi yeIo John McDonald yakapa chiono chinoshamisa chedu ramangwana riri pedyo. Akatsanangura mota dzemazuva ano uye neinoshamisa komputa simba ivo vatove nayo. Kana dzikabvumidzwa, mota dzinogona kutaurirana izvozvi nevaridzi vadzo, dzichivaita kuti vazive kuti ivo vairuka uye vaneta. Motokari dzinogona kukuudza kuti utore nzira inotevera uye unonongedza kuStarbucks iri padyo… nyangwe odha chinwiwa chako chaunofarira.
Ngatitorei imwe nhanho kumberi. Ko kana, pachinzvimbo, Starbucks yakapa mugodhi wevatyairi neIoT tekinoroji iyo yakataurirana yakanangana nemota yako, nzvimbo yayo yepasirese, ma sensors ayo, uye mukombi wevatyairi kukuzivisa iwe kuti chinwiwa chako chakarairwa uye kukwevera pane inotevera kubuda. Iye zvino, Starbucks haisi zvichienderana nesuo rekubhadhara uye kutaurirana nemutengi, vanogona kutaurirana zvakananga nemutengi.
IoT Ichave Kwese Kwese, Mune Zvese
Isu tatoona uko makambani einishuwarenzi anopa madhora kana iwe ukaisa mudziyo mumotokari yako iyo inotaurisa ako ekutyaira maitiro kune iyo kambani. Ngationgororei mimwe mikana:
Yako auto inishuwarenzi chishandiso inotaurisa inoshanda kwazvo nzira dzekutyaira zvinoenderana nemaitiro ako ekutyaira, nzvimbo dzekudzivirira njodzi, kana nzira dzinodzora kukubatsira kukuchengetedza.
Mabhokisi ako eAmazon ane zvishandiso zveIOT zvinotaurirana zvakananga newe kuti zvikuratidze nzvimbo yavo kuti ugone kusangana navo kwavari.
Yako yekambani masevhisi epamba kambani inoisa IoT zvishandiso pamba pako pasina muripo unoona dutu, hunyoro, kana kunyange zvipukanana - zvichikupa iwe kupihwa kuti ubve nekukurumidza sevhisi. Zvichida ivo vanotokupa iwe chipo chekutumira vavakidzani vako.
Chikoro chemwana wako chinokupa iwe IoT kupinda mukirasi kuti utarise maitiro emwana wako, matambudziko, kana mibairo. Unogona kutokwanisa kutaurirana navo muchiitiko chekukurumidzira nyaya.
Wako real estate mumiririri anopinza maIoT zvishandiso mukati memba yako kuti upe chaiwo uye ari kure kutenderera, anokwanisa kusangana, kukwazisa, uye kupindura mibvunzo nevatengi vatengi chero nguva yemasikati kana yehusiku kana zviri nyore kune ese mapato. Izvo zvishandiso zvinoremara otomatiki kana iwe uri kumba uye iwe unopa mvumo pane yako purogiramu.
Wehutano wako anokupa iwe ma sensors emukati kana ekunze aunopfeka kana kugaya ayo anopa data rakakomba kudzokera kuna Chiremba. Izvi zvinokubvumira kudzivirira zvipatara zvachose, uko kune njodzi dzehutachiona kana chirwere.
Yako purazi remuno rinopa maIOT maturusi ayo anotaurirana nyaya dzekuchengetedza chikafu kana kuendesa nyama, miriwo, uye kugadzira ingori-mu-nguva zvakanaka newe. Varimi vanogona kukwidzirisa migwagwa kufanofungidzira mashandisirwo vasingatombofaniri kutengesa kumagirosari megastores nemutengo mudiki. Varimi vanobudirira uye vanhu vanochengetedza pane isingadiwe mafuta ekushandisa kwehuwandu kuendesa uye kugovera.
Zvakanakisisa pane zvese, vatengi vanozove nekutonga pamusoro pedu dhata uye ndiani anogona kuiwana, kuti vanoiwana sei, uye pavanogona kuiwana. Vatengi vanofara kutengesa data kana ivo vachiziva kuti data riri kupa kukosha kumashure kwavari uye kuti rinotarisirwa zvine mutsigo. NaIoT, mabhizinesi anogona kuvaka hukama hwakavimbika nemutengi uko kwavanoziva kuti yavo data haisi kuzotengeswa. Uye masystem pachawo anova nechokwadi chekuti data rakachengetedzwa rakachengeteka. Vatengi vanozoda zvese kudyidzana pamwe nekuteerera.
Saka, zvakadii nezve bhizinesi rako - ungaita sei kuti ushandure hukama hwako netarisiro nevatengi kana iwe uine kubatana kwakananga uye uchikwanisa kutaura navo chaiko? Iwe zvirinani utange kufunga nezvazvo nhasi… kana kambani yako inogona kutadza kukwikwidza munguva pfupi iri kutevera.
Tags: 5gEraiotkutaurirana kwekushambadzira